ဟားဗတ် တက္ကသိုလ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဟားဗက် တက္ကသိုလ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ As of ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၄ (၂၀၁၄ -၀၆-၃၀)[update]. Harvard Endowment Earns 15.4% Return for Fiscal 2014။ The Wall Street Journal။ 10 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ As of 1 March 2018. (1 March 2018)။ "Harvard ataGlance"။
↑ Color - Identity Guidelines - Harvard Business School။ Harvard Business School။ 26 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟားဗတ်_တက္ကသိုလ်&oldid=473139" မှ ရယူရန်
Articles containing potentially dated statements from ဇွန် 2014
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၇:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။